घर को गन्ध राम्रो बनाउन3चालहरु | बेजिया
घर को गन्ध राम्रो बनाउन3चाल
टोय टोरेस | 11/09/2021 16:00 | घर
घर मा एक राम्रो गन्ध एक स्वच्छ र स्वागत घर को वातावरण को आनन्द उठाउन को लागी आवश्यक छ। यो प्राप्त गर्न को लागी, यो आवश्यक छ राम्रो स्वच्छता र सफाई को लागी तपाइँको घर को प्रत्येक कोठा मा। तर केवल सफाई पर्याप्त छैन, किनकि कहिलेकाहीँ केहि प्रतिबद्ध छन् त्रुटिहरु कि घर लाई पुरा तरिकाले sanitized गर्न अनुमति छैन। यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि घर सधैं राम्रो गन्ध आउँछ, तपाइँ केहि चालहरु को पालन गर्न सक्नुहुन्छ।
र यो एयर fresheners वा कृत्रिम इत्र संग खराब गन्ध छलाou्ग को बारे मा छैन। कुञ्जी सफाई मा छ, घर को दैनिक वेंटिलेशन मा र एक विस्तार मा कि प्राय: अनदेखी गरीएको छ, सफाई को तरीका मा। यदि तपाइँ घर राम्रो गन्ध बनाउन चाहानुहुन्छ, हामी तपाइँलाई ती मध्ये केहि लाई तुरुन्तै बताउनेछौं एक सजिलो, सरल र टिकाऊ तरीका मा प्राप्त गर्न को लागी सुझाव.
1 त्यो घर जुन राम्रो गन्ध आउँछ राम्रो वेंटिलेशन संग शुरू हुन्छ
1.1 घर सफाई र सफाई आपूर्ति
1.2 घर मा एक राम्रो गन्ध प्राप्त गर्न को लागी चाल
त्यो घर जुन राम्रो गन्ध आउँछ राम्रो वेंटिलेशन संग शुरू हुन्छ
काम मा एक लामो कडा दिन पछि घर आउँदैछ यो एक उचित आराम प्राप्त गर्न के लिन्छ। तर यदि घर सफा छैन, त्यहाँ कुनै राम्रो गन्ध छैन वा त्यहाँ एक नराम्रो संगठन छ, यो घर को प्रस्ताव गर्नु पर्छ कि भलाई को राज्य को आनन्द उठाउन को लागी अधिक गाह्रो छ। राम्रो वेंटिलेशन घर राम्रो गन्ध बनाउन को लागी महत्वपूर्ण छ र यो आवश्यक छैन कि विन्डोज सबै दिन खुला छ।
बिहान 15 देखि 20 मिनेट को लागी विन्डोज खोल्नु पर्याप्त छ। पाना हावा गर्न ओछ्यान खोल्नुहोस् ओछ्यान बनाउन अघि। क्रस भेन्टिलेशन प्राप्त गर्न को लागी एक वर्तमान खोज्नुहोस्, यो धेरै अधिक प्रभावी हुनेछ। यो सरल दैनिक इशारा संग तपाइँ कोठा बाट नराम्रो odors लाई हटाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
घर सफाई र सफाई आपूर्ति
त्यहाँ कुनै खर्च खर्च घण्टा सफाई छैन यदि तपाइँ सफाई उपकरण सफाई समय बिताउनुहुन्न। रसोईघर को पकाउने प्याड र कपडा, एमओपी, झाडू वा कुनै बर्तन कि सामान्यतया सफा गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। सबै यी उपकरणहरु अवशेष र अवशेषहरु राख्छन् कि यदि सफा छैनतिनीहरूले पनि खराब गन्ध, ब्याक्टेरिया, कवक र सूक्ष्मजीवहरु कि स्वास्थ्य को लागी हानिकारक उत्पन्न गर्दछ।
यस बाट बच्न को लागी, तपाइँले गर्नु पर्छ सबै सफाई बर्तन सफा गर्नुहोस् प्राय, यदि सम्भव भए प्रत्येक प्रयोग पछि। त्यसोभए जब तपाइँ ती सामग्रीहरु लाई सफा गर्न को लागी पुन: उपयोग गर्न को लागी, तपाइँ उनीहरुलाई सही अवस्थामा घर सफा र नराम्रो गन्ध बिना छोड्न को लागी हुनेछ। एक फोहोर एमओपी, खाना अवशेष संग एक कपडा वा भुइँ बाट अवशेष संग एक झाडू, मात्र अधिक फोहोर वितरण गर्न सेवा। बस संग दोहोरो काम बाट बच्नुहोस् तपाइँको सफाई उत्पादनहरु सधैं तयार रहनुहोस्.
घर मा एक राम्रो गन्ध प्राप्त गर्न को लागी चाल
दैनिक वेंटिलेशन र सफाई को अतिरिक्त, तपाइँ केहि चालहरु को उपयोग गर्न को लागी तपाइँको घर राम्रो हर समय गन्ध राख्न सक्नुहुन्छ। हो साँच्चै, गलत गन्ध संग रसायन बाट बच्न किनकि तपाइँ मात्र छलाou्ग गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ र नराम्रो गन्ध को कारण लाई हटाउन सक्नुहुन्न। यसको सट्टामा तपाइँ यी चालहरु मध्ये एक को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ:
एक स्प्रे कन्टेनर तयार गर्नुहोस् र कपडा सफ्टनर संग पानी मिश्रण गर्नुहोस्। हरेक दिन ओछ्यान बनाउनु अघि, पाना पनी यो मिश्रण संग स्प्रे ताकि ओछ्यान सधैं ताजा धोएको जस्तै गन्ध आउँछ।
सूखे फूलहरु संग कपडा पाउचहरु। लैभेन्डर एकदम सही छ यद्यपि तपाइँ potpourri र तपाइँको मनपर्ने गन्ध को केहि बूँदहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सुगन्धित कपडा को थैलीहरु कोठरी भित्र, सफा बिस्तार को बीच मा र तपाइँको घर को कोने मा जस्तै तपाइँको घर को प्रवेश द्वार मा राख्नुहोस्।
ऊतकहरुमा बाइकार्बोनेट। कालीन र बाक्लो कपडा जस्तै सोफा मा ती धुनु गाह्रो छ र धेरै फोहोर जम्मा गर्न को लागी, जो खराब दुर्गन्ध उत्पन्न गर्दछ। हप्तामा एक पटक, कालीन र सोफा मा सुख्खा बेकिंग सोडा स्प्रे गर्नुहोस्। भोलिपल्ट बिहान तपाइँ मात्र गर्नु पर्छ वैक्यूम र बाइकार्बोनेट यसले नराम्रो गन्ध हटाउनेछ।
यी सबै सुझावहरु तपाइँ घर गन्ध रहित राख्न मद्दत गर्नेछ। तर तपाइँ समाधानहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सजावटी पनि हो, जस्तै सुगन्धित मोमबत्ती, सुगन्ध बर्नर वा सूखे फूलहरु। साना इशाराहरु संग तपाइँ एक अधिक स्वागत घर जहाँ तपाइँ आराम गर्न सक्नुहुन्छ र शान्ति को आफ्नो मन्दिर को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » घर को गन्ध राम्रो बनाउन3चाल
कसरी चलिरहेको बेला तपाइँको खुट्टा मा छाला बाट बच्न को लागी